माडीमा पछिल्लो समय युवाहरु पशुपालन व्यवसायमा अग्रसर हुँदै – Nepaliko Aawaj
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २५, २०७७ | ८:२९:०४
अजित अधिकारी चितवन । पछिल्लो समय माडीमा युवाहरु बिदेश पलायन हुने क्रम बढीरहेका बेला बिदेश पलायन हुनु हुँदैन, आफ्नै देशमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ माडी नगरपालिका २ स्थित शितलपुरमा ओम शान्ति कामधेनु कृषि फर्म निर्माण गरिएको छ । जुन फर्म साझेदारी फर्मको रुपमा परिचित छ । यसको प्रोपाइटरमा राम प्रसाद पौडेल रहेका छन । उनका अनुसार, पछिल्लो समयमा युवा बर्गहरु बिदेशिने क्रम बढेपछि बिदेश जाने होइन बरु आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने भाबनाका साथ गाई फर्मको स्थापना गरिएको यसका प्रोपाइटर राम प्रसाद पौडेलले बताए ।
सुरुका दिनहरुमा झन्डै २ देखि सवा २ करोडको लगानीमा ५ जना युवा साथीहरु मिलेर फर्मको निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले सो फर्ममा ६० वटा गाईहरु र २ वटा भैंसीहरु रहेको बताए । तर स्थानीय सरकारले युवा स्वरोजगारको लागि नयाँ कार्यनिति बनाएतापनि व्यबहारमा लागु नभएको र समुदायमा युवाहरुद्वारा निर्माण गरिएको नमुना गाई फर्मका लागि आँफुहरुलाई स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
उनि भन्छन, हामीहरुलाई स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेपनि हामी आफ्नै स्वामित्वमा काम गरिरहेका छौ । अहिले तत्कालको लागि खानेपानीको समस्या छ । जसको लागि बोरिङ्गको समस्या छ । यस बारेमा नगरपालिकासंग कुराकानी गरिरहेका छौ । तर यस विषयकमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको उनि बताउँछन । यसैगरी दुध उत्पादन र खपत के कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले दुध राम्रो उत्पादन भएको र एउटा गाई बराबर अहिलेसम्म ५ देखि ६ माना सम्म दुध दिएको बताए । तर फ्याट राम्रै भए जस्तो लाग्छ । नजिकै रहेको डिडिसिमा लगेर दुध बेच्छौ । तर मेहनत गरे अनुसारको दुधमा फ्याट नआएको र अहिलेसम्म ३.० देखि ३.५ र कहिले ४.० सम्म फ्याट आएको र धेरै माथि सम्म फ्याट स्केल आउन नसक्नुमा समस्या रहेको बताए । तर यस विषयकमा आँफुहरुले स्थानीय सरकारसंग पनि जानकारी गरेको बताए । यसमा समस्या हो या होइन ? यसको परिक्षण गरेपछि मात्र थाहा हुने बताए । अहिलेसम्म ५ जना कामदारहरु रहेको र तिनीहरुलाई आँफुहरुले खाना बस्नको लागि ब्यबस्था सहित एक जना बराबर १६ देखि २० हजार सम्म तलब दिने गरेको बताए । उनले, हामी युवाहरुद्वारा संचालन गरिएको फर्म भएको कारण सम्पन्नशाली ब्यक्तित्वहरुलाई भन्दा, गरिब बिपन्नका परिवारलाई दिनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ बाँदरझुलामा बसोबास गर्ने बिपन्न चेपाङ्ग जातिहरुलाई रोजगार दिएको बताए । काम गर्ने ब्यक्ति र उसको परिवारलाई जिबिको पार्जनको लागि सहज हुने किसिमले सेवा सुबिधा उपलब्ध गराइएको पौडेलले बताए । साथै उनले, बहुबर्षिय घाँसको रूपमा ३० हजार जति सुपर नेपिएर घाँस उत्पादन गरेको र करिब ५ बिगाहा जमिनमा सो घाँस उत्पादन गरिएको छ । भने कृषि औजारहरुको राम्रो ब्यबस्था रहेको सबै पुर्बाधारहरु आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण गरिएको र अहिलेसम्म आँफुहरुले राहत स्वरुप प्रदेश सरकारबाट डि फ्रीज र २ वटा क्यान पाएको बताए ।